Maitiro ekugadzirisa dambudziko re DRM mune iTunes 12.2.1 | IPhone nhau
Apple yakaburitsa iTunes kuvandudza neMuvhuro iyo yakagadzirisa zvinhu zvakati wandei zvaimbove vatengi veTunes Match. Izvo zvakakomba akawedzera DRM (kudzivirira) kuimba dzisingafanirwe nekuti yatove yavo vashandisi. Uye zvakaipisisa pane zvese, kuyedza kuzvigadzirisa, kana zvikaitwa zvisirizvo, zvinogona kutungamira kune rakatokura dambudziko.
Kana uchisimudzira ku iTunes 12.2.1, iyo vhezheni nyowani ichagadzirisa otomatiki ruzivo uye iwe unogona kuenderera nekugadzirisa mafaera, asi tinofanira kungwarira kuti tisabata pane zvatisingafanirwe kana zvingave zvakaoma kudzorera mafaira edu.
Maitiro akafanira ekudzosa nziyo dzedu kunzvimbo yavo chaiyo ndeinotevera:
Maitiro ekugadzirisa zvisirizvo akawedzera DRM dambudziko
Isu tinowana rwiyo rwatinoda kupora.
Tinoita ctrl + tinya murwiyo.
Tinosarudza Delete Download.
Tinoita ctrl + cllick zvakare uye tinosarudza Offline kuwanikwa.
Haina kujeka zvachose uye, kunyangwe iTunes 12.2.1 ichigadzirisa mamiriro ayo, mafaera atakange atoraodha kare anga achine kuchengetedzwa kweFairPlay 2 DRM. Kana pachinzvimbo chekudzima kurodha pasi, tikadzima rwiyo, rwakadzimwawo kubva kuICloud uye zvaisazotibvumidza kurodha faira zvakare pasina kudzivirira kwambotaurwa.
Kana iwe netsaona ukadzima rwiyo rwakatengwa, runogona kupora. Kune izvi isu tichaenda kune edu iTunes account / ruzivo rweakaunzi / iTunes mune gore / zvakavanzika kutenga / maneja. Ikoko tichaona ese akadzimwa maalbum uye nziyo. Isu tinofanirwa kubaya pane "show" bhatani. Tevere, isu tinofanirwa kuenda kune iTunes zvido, tarisa iCloud Music Library uye gamuchira.
Ipapo zvadaro tinogona kurodha nziyo nekutepa pane icon yegore. Ipapo isu tinomutsidzira iyo iCloud mimhanzi raibhurari uye tinogamuchira. Nziyo idzi dzinodzokera kuraibhurari yako pasina DRM kudzivirirwa kuiteerera pane chishandiso chatinoda.
Kana ndichifanira kutaura chokwadi, ndinofunga Apple inofanira kuvhura chishandiso kuitira kuti zvese izvi zviitwe zvega kwete kungoburitsa gwaro rinotsigira. Apo isu vedu takadhirowa yemahara U2 diski pavakaona kuti yasara muraibhurari yedu, takakwanisa kuviga kutenga nechishandiso kana chinongedzo, handicharangarira nemazvo, kuti zvisazotinetsa. Chinhu chakanakisa ndechekuti Apple itange chirongwa chidiki kuti chiitwe zvese kuitira kuti chero munhu azviite zvakachengeteka, nekukurumidza uye zvakanaka. Kana zvisiri, ndinofunga vanhu vazhinji vanozove nematambudziko kwenguva yakareba uye vamwe vashandisi vacharasikirwa nenziyo dzavo nekusingaperi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugadzirisa dambudziko re DRM rakawedzerwa zvisirizvo kune iTunes Match nziyo
888Sport, iko kunyorera kuita mitambo yekubheja kubva ku iPhone